प्रधानमन्त्रीका लागि ४० करोडको नयाँ सरकारी निवास ! « News of Nepal
प्रधानमन्त्रीका लागि ४० करोडको नयाँ सरकारी निवास !
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासका लागि नयाँ भवन बनाउने भएको छ । हालको बालुवाटारस्थित हालको निवास परिसरभित्रै नयाँ भवनको शिलान्यास गरिएको छ । प्रधानमत्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बिहान धार्मिक विधिपूर्वक भवनको शिलान्यास गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रयोग गर्ने निजी भवन करिब एक रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने छ । यो भवनको भुइँतलामा विभिन्न प्रयोजनका लागि १० युनिट निर्माण गरिनेछ । जहाँ पाहुना रुम, लिभिङ रुम, किचन र डाइनिङ, लुगा धुने लाउन्ड्री, सुरक्षा कोठालगायतका संरचना हुने छन्  ।
त्यस्तै तीन तलाको सार्वजनिक भवन करिब दुई रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ । भवनको बीचमा नेपाली परम्परागत शैलीको चोक बनाईने छ । चोकमा नेपालको संस्कृति झल्कने कला र मुख्य धरोहरको नमूनासमेत निर्माण गरिने बताईएको छ  ।
भुइँतलामा अति विशिष्ट व्यक्तित्वसँगको भेटघाट कक्ष रहने छ । भुइँ तलामै आपतकालीन समयमा मन्त्रिषरिषद बैठक बस्नका लागि क्याबिनेट हल पनि निर्माण गरिने छ । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूसँगको भेटघाट पनि भुइँ तलामै गर्ने ब्यवस्था मिलाईने छ ।